तथ्य एउटा कुरा अर्कै ~ The Nepal Romania
तथ्य एउटा कुरा अर्कै
निर्माता संघका कार्यकारी सदस्य जयप्रकाश रिजालको एउटा आरोप छ, 'निर्माताहरु आफैँ होल्डओभर कायम गर्छन् अनि आफैँ टिकट किनेर सिनेमा हप्तौँ चलेको प्रचारवाजी गर्छन् ।' यो आरोपलाई डिसिएनका दिपक दंगालले प्रतिकृया दिन मान्दैनन् ।
'त्यो प्रचारवाजी गर्ने काम निर्माताहरुको हो । हामीले फिल्म वितरण गर्ने हो । हामीले बजारमा पठाएका फिल्महरुले राम्रै व्यापार गरिरहेका छन् ।' बक्स अफिसको रेकर्डअनुसार 'दशगजा', 'प्रहार' 'निगरानी' जस्ता फिल्महरुले औषत व्यापार गरे । डिसिएनले वितरण गरेको अहिलेका केही चलचित्र 'निगरानी' 'प्रहार' र 'दशगजा' हुन् । 'दशगजा'ले चालिस लाख ग्रस बटुलेको छ, 'प्रहारले' एक करोँड रुपैँया ग्रस बटुलेको देखिन्छ । त्यसैगरी 'निगरानी'ले त्रिपन्न लाख रुपैँया ग्रस बटुलेको तथ्यांक छ, जुन औषत भन्दा मुनि छ । दंगालले दावी गरेअनुसार निगरानीले 'राम्रो' व्यापार गर्‍यो । तर बक्स अफिस रेकर्ड हेर्दा भने उसको स्तर औषत भन्दा मुनी रह्यो । मेरोसिनेमालाई बताइएअनुसार डिसिएनले वितरण गरेका सिनेमाहरुको कमाइबाट निर्माताहरु खुसी छन् । तर यो विश्लेषणलाई ख्याल गर्दा अवस्था भने अर्कै देखिन्छ । यसप्रकार तथ्यांक एकातिर र निर्माता, विश्लेषक र वितरकहरुको कुरा अर्कै देखिन्छ । नेपाली सिनेमाले यो स्तरबाट छुट्कारा पाए स्थितिमा केही सुधार आउने पक्का छ ।
नम्रताले पनि स्विकारिनन्
समीक्षा : 'श्रीमान्'
बन्द सिद्धियो, अब रिलिज
‘म आत्महत्या गर्न सक्छु !’
समीक्षा : मेरो प्यारो माइतिघर
‘गर्लफ्रेन्ड’का पतिले कुटे भुवनलाई बीच सडकमै
सहरै कुरूप पार्ने फिल्म पोस्टर
'पल'ले प्रीमिएर र च्यारिटि सो गर्ने
रजतपटमा सम्बन्ध जोड्ने र तोड्नेको लहर
दोस्रो पुस्ता हावि हुँदै
राजेश भर्शेश राजेश !
रेखा किन भइन् थकित ?
गायक राजु लामासँग पूजाले दोस्रो बिहे गर्ने
अन्जु पन्तले गरिन डिभोर्स